Air Korean kụrụ osisi na Mongolia
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Air Korean kụrụ osisi na Mongolia
Airlines • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Njem azụmahịa • omenala • Akụkọ Mongolia • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Akụkọ South Korea na -agbasa • Transportation • Mmelite nke Njem njem
Nwere ike 17, 2017
Korean Air anọwo na-ebute ụzọ n'ịchekwa ụwa site na afọ ofufo maka afọ iri abụọ na anọ iji kụọ osisi na Mongolia.
Site na Mee 15 rue 26th, ihe kariri ndi oru Korea 200 ga esoro ndi mmadu bi n’ime 600 ga-agha osisi na Mongolia. Ọrụ a bụ akụkụ nke Korean Air's 'Global Planting Project' nke na-achọ igbochi ọzara obodo na ịchekwa gburugburu ebe obibi. Ihe bụbu ebe anapụghị enwe ugbu a nwere ihe karịrị osisi 110,000 kụrụ wee kpọgharịa ya 'Korea Air Forest'. Oké ọhịa ahụ dị na Baganuur, obodo dị kilomita 150 n’akụkụ ọwụwa anyanwụ nke Ulaanbaatar, isi obodo Mongolia.
'Korea Air Forest' na-ekpuchi mpaghara nke 440,000 square mita ma mejupụtara tumadi nke osisi poplar, buckthorn oké osimiri na Siberia elms. Mkpụrụ nke oké osimiri buckthorn na-eji dị ka Efrata nke vitamin ọ drinksụ drinksụ. Ya mere, ịkụ osisi anaghị eme ka obodo na-acha akwụkwọ ndụ ma na-enyekwa aka ịba ụba ego ndị bi na ya. Gbọ elu ụgbọ elu ahụ lekwasịrị anya n'ọhịa ahụ nke ọma ma goro onye ọrụ mpaghara ka ọ lekọta ya ma zụọ ndị bi n'ógbè ahụ nlekọta.
Ọzọkwa, Korean Air nọ na-enye onyinye ihe agụmakwụkwọ dị ka kọmpụta, tebụl na oche maka ụlọ akwụkwọ dị na mpaghara nke na-esonye na ụgbọ elu ahụ na-akụ osisi. N'ihi mgbalị ndị Korea Air na-eme n'ihu, mkpebi siri ike ndị mmadụ ichekwa gburugburu ya toro nke ukwuu ma ha abụrụla ndị ji ịnụ ọkụ n'obi na-akwado ọrụ ịkụ ihe kwa afọ.
E wezụga ịkọ osisi, Korean Air nwere ọtụtụ mmemme na ahịa dị iche iche ebe ọ na-efe iji nyere ndị obodo nọ ná mkpa aka. N'iji usoro mgbasa ozi zuru ụwa ọnụ ya zuru oke, ụgbọ elu ahụ enyela ngwa ahịa enyemaka dị ka Myanmar, Nepal, Japan na Peru mgbe ọdachi ndị na-emere onwe ha metụtara ha. Korean Air ga-aga n'ihu na-arụ ọrụ mmemme nke ọrụ ụlọ na ụlọ na mba ofesi, na nkwado nke ichedo gburugburu ebe obibi, na-enwe mmepe na-adigide ma na-akwado ndị obodo.